Shir Looga Hadlayey La dagaalanka Kooxaha Xagjirka Ah Oo Nairobi Lagu soo Gabagabeeyey “Sawirro” – Radio Muqdisho
Shirkan oo loogu magac daray ka hortaga fikirka guracan ee kooxaha xagjirka ah oo mudo 3-maalin ah ka soconayay Xarunta shirarka caalamiga ah KICC ee magaalada Nairobi ayaa maanta waxaa si rasmi ah u soo xiray madaxwaynaha dalkani kenya Uhuru Kenyatta, waxaana intii uu soconayey shirkan kasoo qayb galay ergooyin ka kala socday 42 wadan iyo xubno matalayey qaramada midoobay .
Madaxwayne Uhuru Kenyatta oo qubad dheer ka jeediyey gabagabadii shirkan ayaa ugu horeyn tacsi u diray guud ahaanba dadkii ku waxyeeloobay falalkii kooxaha xagjiririinta ahi ay ka gaysteen qaarada afrika, Mr Kenyatta ayaa dhanka kale si qoto dheer uga hadlay midnimada qaarada afrika oo uu sheegay inay tahay habka kaliya ee lagaga guuleysan karo kooxaha xagjiriinta ah.
“ Guud ahaan afrika Kenya Soomaaliya iyo Uganda, waxaynu ku wada simanahay weerarada ay fulinayaan kooxaha xagjiriinta ah, waxayna mas’uuliyad ka saarantahay sidii looga hortagi lahaa dhibaatadaasi dowladaha iyo shacabka intaba,waxaa hubaal ah inaan ka guuleysan karno hadii aan wadaagno iskaashiyo dhanka milaratiga siyaasada iyo isdhaafsiga xogaha ah”Ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
Waxaana sidoo kale gabogabadii shirkan hadalo ka jeediyey wasiirada Amniga ee wadamada Kenya, Soomaaliya, Ethopia, Uganda iyo wakiilo ka socday qaramada midoobay iyo midowga yurub, iyagoo dhamaantood carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in si wada jir ah loola wada dagaalamo fikirka xagjirnimada ah.
Dowlada soomaaliya ayaa kulankan waxaa uga qayb galay wasiirka Amniga gudaha C/risaaq Cumar Maxamed, iyo mas’uuliyiin ka tirsan saafarada soomaaliya ee dalkani kenya.
Wasiirka Cabdi risaaq oo la hadlayey warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay soomaaliya ku soo bandhigtay shirkan maanta qaabab fara badan oo loola dagaalami karo kooxaha argagixisada ah maadaama ay khibrad badan ka qaadatay iskudayada iyo weerarada tirada badan ee kooxahani ay ka geystaan gudahada dalka soomaaliya.
Cabdiraxmaan Cumar Cabdi ( Cabdiraxman soomaali )
Dibad bax looga Soo horjeeday nadaafad darro iyo Biyo la’aan ka jirta Degmada Kamukunji oo Islii Ka Dhacay”Sawirro”
Ku dhawaad 30 carruur ah oo ka qalin jabisay Mu'asasad Umul Qura "SAWIRRO"